Ahoana ny fomba hanesorana ny tifitra amin'ny tapatapakelaka miaraka amin'ny nonenina, taratasy, karazana vinyl?
Tena tian'ny ankizy ny milalao ary matetika ny vokatry ny asan'izy ireo dia azo jerena eo amin'ny rindrina. Misy fomba maromaro hanesorana ilay tifitra avy amin'ny tapakila, izay tsy maintsy nofidina araka ny kalitaon'ny loko sy ny toetoetran'ireo loto ireo.
Ahoana ny fomba hanadiovana ny kitapo avy amin'ny fitaovana?
Rehefa mifidy ny mpanadio, dia tsy maintsy manadino ny sary sy ny kalitaon'ny wallpaper ianao, satria ny vola azo ampiasaina amin'ny fanasana tapakila dia voarara tanteraka amin'ny fampiasana taratasy vita. Ny torolàlana momba ny fomba hanesorana ilay fitondràna amin'ny tabilao dia manondro fa zava-dehibe ny manandrana manomboka manala ny "zavakanto" haingana araka izay tratra, satria mora kokoa ny mahazo tsara kokoa noho ny amin'ny trangan-javatra tranainy.
Noho ny fanesorana ny tifitra avy amin'ny tapatapany tsy tonta?
Azonao ampiasaina ny fitaovana fanesorana ranoray eto ambany, fa raha tsy miasa izy ireo, dia ampiasao ilay "fitaovam-piadiana miafina". Raha liana ianao dia manasa ny tapa-taratasy amin'ny tapatapakapa tsy misy tapatapany , dia araho amin'ny alalan'ity torolalana ity:
Manomana amoniana na alikaola. Manolo-batana ny fonon-tanana mba hiarovana ny tananao.
Mandroa ny sponge na ny kavina amin'ny alamia ary mihatra amin'ny toerana misy ny loto. Tazony mandritra ny 5 minitra ny fanesorana azy.
Ahoana ny fomba hanesorana ny penina eo amin'ny fonon'ny taratasy?
Ny fanimbana ny tontolon'ny taratasy dia ny mora indrindra, noho izany dia zava-dehibe ny hanadiovana araka izay azo atao. Tsy misy na inona na inona tsy afaka manasa ny taratasy, ka ny fanadiovana maina ihany no tokony ampiasaina. Ampiasao ireto fomba manaraka ireto hanesorana ny tifitra amin'ny tetikasa:
Ao amin'ny vinaingitra 70% dia manampy ny manganese mba hahazoana vahaolana mavokely. Manaova spaonjy ao anatiny ary mandehana any amin'ilay faritra voapoizina. Aorian'ny 10 minitra. Tokony hanjavona ilay fefy, fa ny lokon'ny mavokely kosa dia hijanona. Mba hanesorana azy, ampiasao ny peroxyde.
Ho an'ny lamaody fotsy fotsy, ny ditepost tsy misy pentika dia mety. Soraty eo amin'ny borosy izany ary atsangano tsara ny faritra misy azy. Esory miaraka amin'ny lamba ny sisa tavela. Ho an'ny sary hosodoko amin'ny sary dia misafidiana fiasan'ny amoniaka.
Ahoana ny fomba hanesorana ny fantson'ilay wallpaper vinyl?
Ankoatra ny fitaovana voalaza etsy ambony sy etsy ambany, dia azonao ampiasaina ny fanesorana ny loto sy ny fanasan-damba. Ny filazalazana izay azo diovina amin'ny tapakila vita amin'ny rindrina vinyl , tsara ny manamarika, zava-dehibe ny tsy ahodin-doha ny tavy, satria mety hiharatsy ny plastika. Araho ireto torolalana ireto:
Ampiasao ny savony fanasan-damba ary ampio rano kely mafana ny fanindronana. Any amin'ny farany, tokony haka vahaolana ianao.
Ampiasao amin'ny sponge, ampiharo amin'ny marika avy amin'ny fefy eo amin'ny tapakila. Zava-dehibe ny tsy manao hetsika tampoka, mba tsy hanimbana ilay faritra.
Mijanona ny vahaolana amin'ny savony ary esory miaraka amin'ny lamba maina, ary esory avy eo. Raha mitoetra ny tsimokaretina, dia avereno averina ilay dingana.
Ahoana ny fomba hanesorana ny fantson'ilay tapakila mety hosasana?
Amin'ity tranga ity dia afaka mampiasa fomba isan-karazany ianao, satria tsy manamaivana ny fahamendrehana izany fiakarana izany. Misy fomba mahomby toy ny fanesorana ny tifitra avy amin'ny sary mihetsika tsy misy soritra:
Mba hanesorana ranomainty, ilaina ny manampy vovo-tsiramamy madinidinika kely ao anaty rano. Mametafeta ny sponjy amin'ny vokatra voaomana, mitantana ny faritra misy olana. Avereno atao ilay dingana mandra-pahatongan'ny vokatr'izany.
Ny famaritana ny fomba hanesorana ilay tapa-taratasy avy amin'ny tabilaara dia tokony hanonona fomba hafa mahomby, mampiseho ny fampiasana asidra na asidra citrique. Sasao ny sira avy amin'ny antsasaky ny lemon-koditra, mamaivay ny tavy eo amin'ny kibo ary arotsaho ny tadiny avy amin'ny fefy. Raha ilaina dia avereno ilay dingana.
Arak'izany dia afaka manasa ny fitondrana amin'ny fonosana ve ianao?
Taratasy vita sary hosodoko - tsy fialan-tsiny izany mankany amin'ny trano fivarotana, satria maro ireo fomba fanao amin'ny fomba fanadiovana. Ny fikarakarana ny fomba hanasana ny fako eo amin'ny tora-pasika, dia ilaina ny manonona fitaovana toy izany:
Mba hanesorana ny ranomainty eo amin'ny kitapo, azonao atao ny maka tsimoka iray misy lafiny roa. Amboary ny teboka amin'ny lafiny iray natokana ho an'ny tanana. Zava-dehibe ny manao ny zava-drehetra mba tsy hitoetra ireo fotsy hoditra fotsy.
Hanampy amin'ny fanadiovana ny sponge tapakila melamine, izay mila manala ny tady, saingy tsy misy ezaka be fotsiny, mba tsy hamiravira ny tapakila. Io fomba fanao io dia tsy mahomby afa-tsy amin'ny toerana vaovao.
Esory ny loko amin'ny fampiasana mofo kely fotsy, izay tsy maintsy ho vaovao. Tsindrio ny totozy amin'ny tontolon'ny loko. Zava-dehibe ny fampiasana an'io fomba fanao io amin'ny rivotra maloto.
Atsofohy ny ronono ary alatsaho amin'ny totozy kofehy eo amin'ny tsipika ranomainty. Omeo ny maina ny rano ary avereno ny ranomainty.
Misy fitaovana izay mety ho an'ny fotsy fotsy fotsy ihany - "Whiteness". Ataovy azo antoka ny hametrahana fonon-tanana. Afangaro ny vokatra amin'ny rano amin'ny ratio 1: 5. Amin'ny vahaolana vita, mamono ny sponjy, manosika azy io ary mitondra ny faritra voamaina mba hanesorana ny plastika. Manomboka miala avy hatrany ny ranomainty.
Mahavariana fa ny olana amin'ny famoam-boto, izay tokony ampiharina amin'ny ranomainty ary dia maina dia hanampy amin'ny olana. Aorian'izany, esory amin'ny zava-drehetra miaraka amin'ny sponjy ny fefy.
Ahoana no hanadiovana ny kitapo amin'ny penina penitra?
Mba hahatratrarana vokatra tsara, dia tsy azonao atao ny mihatra amin'ireo fomba fanadiovana voalaza etsy ambony, fa koa ireo safidy toy izany:
Mahaliana ny fomba hanesorana ny penitra avy amin'ny tapakila, avy eo dia mahazo rano mba hanesorana ny varotra, fa tsy tokony hanana acetone. Ampiharo amin'ny vokatra fotsiny ny vokatra amin'ny kibony. Raha toa ka tsy misy ny vokatra irinao voalohany, dia avereno averina ilay dingana.
Raiso rano 100 ml ary ampio 10 grama oksika asidra sy asidra asidra. Ao anatin'ny vahaolana voaomana, mamaivay ny sponjy ary mitondra ny faritra voapoizina.
Ahoana ny fomba hanesorana ny ranomainty amin'ny pen?
Ny fetra sisa tavela amin'ny ranomainty dia manondro ny vondrona maraokana, ka tokony hanomboka hanadio amin'ny fotoana fohy. Misy fomba maromaro hanesorana ilay fitambaran-tanana avy amin'ny rakitra:
Raha mahita pentina eo amin'ny loko ianao avy amin'ny ranomainty, dia raiso ny vy. Amboary ny mozika raha tsy misy rano. Apetaho eo amin'ny rindrina taratasy taratasy fotsy ary esory avy any ambony izy. Vokatr'izany, ny ink dia tokony hiditra ao anaty taratasy, hamela fonosana madio.
Misy fomba tsy mahazatra amin'ny ady ary ho azy dia mila mandrehitra ny atody sarotra mafy. Arovy izy ary tapaho halavany. Apetaho ny sombin-tsolika iray mankany amin'ny kitapo ary miandry minitra maromaro ho an'ny ranomainty. Aorian'izany, esory amin'ny rindrina ny lamba rindrina.
Ahoana ny fomba hanasana ny penin-dandy halefany?
Raha miala amin'ny solosaina ny plastika dia azonao ampiasaina araka ny tokony ho izy ireo fomba ambaranao etsy ambony, saingy misy karazan-tsakafo vaovao maromaro:
Tadiavo ny fomba hamafana ny fako amin'ny tànana avy eo amin'ny kitapo, dia makà siramamy kely ary ampio rano kely aminy, mba hahatonga ny vokatra ho sarotra. Tokony haparitaka amin'ny faritra voapoizina misy rakotra kodiarana izy io. Ny sisa dia tokony hadio amin'ny lamba malefaka.
Ny vokatra tsara amin'ny fanadiovana dia azo atao amin'ny fampiasana sira, fa amin'ny endrika maina tsy ampiasaina, satria mila rano. Azonao atao ny mampifangaro azy amin'ny rano, fa tsara kokoa ny maka asidohidro. Raha liana ianao amin'ny fanesorana haingana ny fefy avy amin'ny kitapo, dia makà 200 ml ny rano ary ampio ny 1 sm. kobam-boankazo saline ary 1 teaspoon sala table. Manaova ary ampiasao ny vahaolana vita miaraka amin'ny borosy na sponjy amin'ny marika avy amin'ny fefy. Miandrasa mandra-pahatongan'ny vovoka ary esory amin'izay ny sisa tavela amin'ny lamba maloto.
Slugs - ahoana no hialana?
Fanadiovana ny vy ao an-trano
Trano Scolopendra - ahoana no fialana?
Ahoana ny fomba hanadiovana ny akanjo tsy hihinana tsihy?
Manasonia akanjo amin'ny fanasana - fametrahana ny marika eo amin'ny labels
Karokôbôla mitopatopa miaraka amin'ny manga - recipe
Zaza simmental an'ny ombivavy - endri-javatra amin'ny zana-trondro, pluses ary ny minus ao amin'ny votoatiny
Sarin'antoka sarinà sary amin'ny akanjo
Shinoa Smart Watches
Strabismus - fitsaboana
Sakafom-boankazo tsy misy pentina ho an'ny famokarana
Ahoana ny fomba hampihenana raglan amin'ny fanjaitra?
Cyst of the ovary left - treatment
Ny fitomboan'ny Adriano Celentano
Ikala hahasoa ny fianakaviana
Playboy dia manova ny fitsipika: ny mpandidy sy ny Hugh Hefner dia nanamboatra ny fonon'ilay gazety
Kirsten Dunst ho an'ny gazetiboky InStyle - foto-drafiana mahafinaritra sy fanadihadiana mahaliana
Karazana rindrina efa natsangana
Toeram-pandriana ao amin'ny trano ao Khrushchev